IELTS bvunzo kugadzirira | BLI Zvikoro zveMitauro muCanada
Gadzirira ramangwana rako
IELTS Ongororo Yokugadzirira
IELTS muedzo wepasirese wakatemerwa wechirungu mutauro kugona. Inoyera hunyanzvi hwemutauro wevanhu vanoda kudzidza kana kushanda uko Chirungu chinoshandiswa senge mutauro wekutaurirana. Iyo inoshandiswa pakudzidzisa, kutama uye kuita basa. Iyo IELTS yekugadzirira kosi yakaitirwa kubatsira vadzidzi kuvandudza mutauro wavo kugona uye kuwana yakanyanya kunaka mamakisi eIELTS bvunzo.
Yedu yekugadzirira IELTS kosi inokupa iwe sumo kune chimiro cheiyo IELTS bvunzo pamwe nekudzokorodza kwetekinoroji yeimwe neimwe yezvinhu. Iwe unozodzidza zvekutarisira panguva yeIELTS bvunzo uye nekuvandudza yako danho kuburikidza nekudzidzira uye kuongorora. Shandisa mabhuku epamutemo ekudzidzira zvinhu uye gamuchira mhinduro kubva kumudzidzisi
Makirasi edu madiki, achibvumidza iwe kugamuchira yakasarudzika ruzivo rwekuziva. Iyi kosi inokubatsira kuziva kwakanyanya kukanganisa zvikwaniriso uye inokupa iwe hunyanzvi hwaunoda kuti urege kuzodzokorora ivo paZuva reKwayedza.
Iyo kosi yakagadzirirwa kujairira vadzidzi nemhando yeiyo IELTS bvunzo nekudzokorora zvakada kufanana nezvavachaona paIELTS bvunzo. Kirasi iyi inotarisa pakubatsira vadzidzi kuvandudza hunyanzvi hweumwe neumwe (kuverenga, kunyora, kuteerera, uye kutaura). Vadzidzi vano dzidza nekutora simulation bvunzo uye kudzidza nzira dzakasiyana nemaitiro kuvabatsira kugadzirira bvunzo uye kuwana zvakanakisa chikoro.
Mari yehurongwa inosanganisira
KUTI ITS TEST
BLI Montreal inyanzvi yeIELTS yekuyedza nzvimbo. Ndokumbira kuti uone kuti mazuva iwayo anogona kuchinja. Kana iwe uchida kutora iyo IELTS bvunzo, iwe unofanirwa kutevera matanho kuburikidza neinternet kunyoresa kana kutaura nemumiriri weBLI kune rumwe ruzivo.
Nekuda kweiyo Covid-19 mamiriro, hapana mazuva ekuuya eedzo.
Yese yepamutemo musangano kutanga mazuva
Minimum 4 vhiki
Upamhi kwemavhiki gumi nemaviri